ဒင်းနစ်အောင်အောင်| December 15, 2012 | Hits:1
နိုင်ငံခြားဖြစ် ၀ိုင်များ တင်သွင်းမှု စိစစ် ကြပ်မတ်တော့မည်ADB က မြန်မာကို ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၅၆၀ ပေးထားသီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကုမ္ပဏီ ၂၁ ခု လက်မှတ်ထိုးစတော့ အိတ်ချိန်း ၀င်ရန် ပြည်တွင်း ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီကြီးများ မသေချာသေးရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းက မြေကစားတဲ့ငွေတွေ ရွှေနဲ့ ဒေါ်လာတွေ ဝယ်ကြသလား
Salai Lian December 15, 2012 - 11:34 pm Thailand has countless ATM locations where we can use our Credit Cards and our Bank Cards. There are countless Exchange Locations too. We can even change at the Hotels and every grocery stores. Very convenient. Burma must loosen too if the government wants to see foreign currency flowing into Burma.
Reply arthit December 16, 2012 - 8:20 pm ဖြစ်သင့်တာ တော်တော်ကြာနေပါပြီ ။ ဒါမှဘဲ ဘဏ်တွေအနေနဲ့ ထင်တိုင်းကြဲလို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ။ ကောင်တာ ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လည်း ဘဏ်တွေပုံစံအတိုင်း ကန့်သတ်ချက်တွေများနေရင်တော့ အများညိုညင်မှုကို ခံနေရဦးမှာဘဲ ။ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်း ဆိုတဲ့စကားကို အပြည့်အဝနားလည်နိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ။
နိုင်ငံခြားဖြစ် ၀ိုင်များ တင်သွင်းမှု စိစစ် ကြပ်မတ်တော့မည်